दिपेश किशोर भट्टराईका जोर गजल | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका दिपेश किशोर भट्टराईका जोर गजल – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
दिपेश किशोर भट्टराईका जोर गजल
दिपेश किशोर भट्टराई
हसाउँछु भन्दै मलार्इ रुवाएरै छाडिस हैन ?
तिम्रोआँसु थाम्छु भन्थिस चुवाएरै छाडिस हैन ?
मलार्इ प्रेम विवाहमा बिश्वास छैन भन्दा पनि ।
जालमा फसार्इ अनि धोका खुवाएरै छाडिस हैन??
जिन्दगिको हरेक मोड्मा साथ दिने कसम खाइस ।
देखाइस औकात खा’को कसम तुहाएरै छाडिस हैन?
आफू भने परदेश लागे लाखौं सपना मनमा राखी ।
आज मेरो पसिनाले नुहाएरै छाडिस हैन ?
पतिव्रता हु म भन्थिस रामायणको सीता समान ।
आखिर तेरो चरित्रलाई कुहाएरै छाडिस हैन?
घर ब्यवार सुम्पिएर तलाइ छोडी पर्देश लागे ।
दुनियालाइ मेरो कमाइ खुवाएरै छाडिस हैन?
शहर गए गाउमा पाइने खनीऊ बिर्सिए ।
ढाका टोपी दौरा सुरुवाल गुनिऊ बिर्सिए ।।1।
शहरिया बनेका छन सबै गाउँका साथीहरू ।
कस्तो हुन्छ भन्छन धानको कुनिऊ बिर्सिए।।2।।
काटा अनि चमज मात्र चिन्छन अरे आजभोलि
गाउमा ढिलो मुसार्ने त्यो पनिऊ बिर्सिए ।।3।।
शहर गएका साइला दाइले गाई भैंसी चिन्दैनन रे ।
गाउमा घाँस काटेको खरुकी र उनीऊ बिर्सिए ।।4।।
ढाका टोपी दौरा व सुरुवाल गुनिऊ बिर्सिए ।।
This entry was posted in गजल and tagged Bhattarai, Dipesh, Kishwor, Pallawa, दिपेश किशोर भट्टराई, पल्लव. Bookmark the permalink.
← “मायाको प्रमाणको खोजि”